ဂဇက်ပွဲက ဓာတ်သေများ (၄) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဂဇက်ပွဲက ဓာတ်သေများ (၄)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jan 23, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing, Myanmar Gazette | 14 comments
movie ထဲကပုံတွေပါ.. နောက်ဆုံး ဓာတ်ပုံပိုစ်ပါ. တစ်ချို့ပုံတွေမှာ resolution မကောင်းတာ တွေပါနေပါတယ်..
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ.. အိမ်က ထွက်လာကတည်းက သြော် ဓာတ်ပုံပဲရိုက်မှာ ပါလေ ..
ပြီးတော့ ဂဇက် လူဂျီးတွေကလဲ ပရိုက်ဗက်စီ ကို မထိခိုက်အောင် သတိပေးထားတော့ သိပ်ရိုက်ဖြစ်မယ်မထင်လို့ တမင်တကာကို ကင်မလာထဲပ 32Gb ကတ်ကိုထုတ်ပြီး 4GB နဲ့လဲလိုပ်ပါလေရော.
.အလုပ်ရှုပ်ခံပီးတော့ကို တမင်တကာလဲလိုက်တာ.. ဒါပေမယ့် တွက်ကိန်းကတော့မမှာဘူးဗျ.. သိပ်လဲမရိုက်ဖြစ်ဖူး..
အဲဒီလို၇ိုက်နေတုန်း movie ရိုက်ဖို့ သွားသတိရလိုက် လို့ ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ.. ပြဿနာ က movies setting မှာ movies quality ကို ချိန်မထားတော့ ဆိုက်ကြီးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ အခါ.. 4GB လေးခမျာ.. ကြာကြာမရိုက်နိုင်ရှာတာကြောင့်
နောက် ဆုံးမှာ မတတ်သာတဲ့အဆုံး quality ကို လျော့လိုက်ရတာကြောင့် နောက်ပိုင်း movie မှာ ၀ါးတားတား ဖြစ်သွားရတာက တစ်ပြဿနာ..
နောက်ပြဿနာက ခုနလိုရိုက်နေတုန်းမှာ မိတ်ဆက် စကားတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ ပြောနေကြတာကို ကြည့်လိုက်ရီလိုက် လုပ်နေလို့ ကင်မလာက တစ်ပိုင်းပြီး တစ်ပိုင်းရိုက်ပြီး ရပ်သွားတာကို သတိမထားမိလိုက်တာကြောင့် အကုန်လုံး ကိုမရလိုက်ကြောင်းပါ..
ကလုလင် နဲ့ အဘ ဖောလဲ ရိုက်ထားတာတွေရှိသဗျ.. သူတို့လဲ တင်ခိုင်းကြပါဦး
37: အနော့ကို ပန်ချာပီ ဆိုတဲ့လူဂျီး
ဆြာအုပ် ရေ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ
ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့အားရပါးရကို ကြည့်ပြီး အမှတ်တရကူးယူထားလိုက်ပါတယ်….
မရ ရတဲ့  ပုံ တွေ တင်တော့ တာပဲ ဟဲဟဲ
ကျွန်မတို့ နောက်ဆုံးဝိုင်းကျမှပဲ ရုပ်ဖျက်ခံလိုက်ရတာပေါ့လေ ….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ါးတားတားဆိုတော့လဲ မလှတာ သိပ်မပေါ်တော့လို့ အဆင်ပြေပါတယ် …
လာချင်ရက်နဲ့မလာလိုက်ရလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုချိတ်တိုတယ်
နောက်လာမဲ့  ၆ လမှာ ထပ်လုပ်မှာမို့ 
မန်ဘာ အားလုံးကို အခွင့်သင့် ပါက
နာမည်နဲ့ လူနဲ့ ဆန့် ကျင် ဘက် ဂျလေဘီ သည် ကြီးကိုတော့ သိ သွား ပြီ။
နောက်ဆုံး ၀ိုင်းက လူတွေ ၀ါးတားတား နဲ့ ပါလား.. ၀ါးနေတော့ ပို လှ လာသလိုပဲ.. ဟိဟိ
မိုက်တယ် .. အဲလိုပုံလေးတွေမကြည့်ရတော့ဘူးထင်နေတာ ..
ခုတော့လူစုံတတ်စုံ ကြည့်ရတယ်တော့ …
အကုန်လုံးက ပျော်နေကြတာ …. :hee:
အကုန်လုံးက ပျော်နေကြတာ တော့ ငြင်းမရဘူးဗျို့
ကျုပ်ဆို ၁၆နှစ်သားလေးလို နုပျိုလန်းဆန်းသွားတာ.. …. :hee:
သွားတိုက်ဆေးကြော်ငြာအတွက် အနော့်ကို ဆက်သွယ်ပါ…
ပုံတွေအားလုံးအတွက် ကျေးကျေးပါ ဆြာအုပ်ရေ.. ကူးပီးဂျောင်းဘာ…
သိကြားမင်းကို တော့ ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်အောင် ရိုက်ပေးလို့
သူဒို့ သိပ်ပီး ပေါ်နေ .. အဲ .. ပျော်နေဂျဒယ်ပေါ့လေ …
ဒါနဲ့ … စကားမစပ်ဗျာ …
စာရွက်ကြီး ကိုင်ထားတဲ့လူ …
ဆံပင် ထောင်ထောင်နဲ့လူ …
အိုက်လူက မိုက်ကိုင်ပြီး ကြက်ခြောက်နေဒါလားဂျ …
သူ့ ပါးစပ်ကျိရဒါ “ရှူး” လို့များ အသံထွက်လေမလားလို့ပါ …